आहा ! यस्तो पो होस माया, इन्द्रे णीका छत्र शाही र काजल जोसीको भाइरल टिक-टक हेर्नुहोस् – (भिडियो सहित):: Mero Desh
आहा ! यस्तो पो होस माया, इन्द्रे णीका छत्र शाही र काजल जोसीको भाइरल टिक-टक हेर्नुहोस् – (भिडियो सहित)
Published on: २८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०९:३९
“पछिल्लो समय चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका छत्र शाही र काजल काजल जोसीको जोडी दर्शक श्रोताहरुले एकदमै रुचाएका छन । दोहोरि गाउने क्रममा भेट भएका काजल र छत्र,
“इन्द्रेणीको दोहोरि कार्यक्रममा एकाअपसमा दोहोरि खेल्दा धेरै दर्शक श्रोता हरुले उनीहरुलाइ वास्तविक जीवनमा पनि साँच्चिकै जोडी हुन भन्ने प्रश्न गर्छन । तर दुवै मध्य एकजनाले बाहिर खुलस्त नभने सम्म हामिले गर्ने आँकल्न मात्र त हो ।
“काजलको स्वर अरु कलाकार भन्दा अलि धेरि फरक र छुट्टै किसिमको मिठास रहेको छ । त्यस्तै उनी दोहोरीमा पनि निकै नै खपिस छन । त्यस्तै छत्र साही पनि दोहोरि मा खप्पिस नै छन ।
“काजल र छत्रको केहि दिन अगाडी उनीहरुको दोहोरि युटुबको टप ट्रेण्डिङ लिस्टमा परेको थियो । यसको सफलतापछि फेरि काजल र छत्रको दोहोरिको दोस्रो भाग पनि सार्वजनिक भएको थियो । उक्त दोहोरीले पनि पहिलो भाग जत्तिकै नै रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको थियो ।
“काजल र छत्र टिकटकमा पनि निकै नै सक्रिय रहेका छन । उनीहरुको टिकटक भिडियोलाइ लाखौ ले हेर्ने गरेका छन । अब प्रस्तुत छ काजल र छत्रको निकै नै रमाइलो टिकटिक भिडियो ।
“तेस्तै छत्र बिमारी हुँदा पनि काजले हेरचाह गरेकी थिईन चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका छत्र साहीलाई बिस्तारा बाट लेखे यस्तो भा’बु’क स्टाटस ! कार्यक्रम इन्द्रेणी का छत्र साहीले आफु अस्वस्थ भयको जानकारी गरायका छन्।
“सामाजिक संजाल फेसबुक स्टाटस राख्दै छत्र साहीले आफु अस्वस्थ भयको र ओछ्यानबाट समेत आफु नउठेको भन्दै धेरैको कल अनि म्यासेजहरुको समेत प्रतिक्रिया दिन नपायको भन्दै सबैलाई माफीसमेत मागेका छन्।
“एकै पटक आफुले अहिले ३-४ किसीमका औसधीहरु खान परेको भन्दै छत्र दुखीबनेका छन्। कला र म्यासेजको रेस्पोन्स गरेन भनेर कसैलाई पनि दुखीसमेत नहुन अनुरोध गरेका छन्।
“उनले फेस्बुमा स्टाटस लेख्दै एस्तो भनेका छन् “बिरामी पनि कति हुन सकेको म । एकै चोटि ३-४ थरिको औषधिखान परि रहेको छ। ओछ्या नबाट उठेको छैन आज। धेरैले कल गर्नु भाछ रिसिभ गरेन भनेर दु,ख नमान्नु होला ल।”
“उनको यस्तो स्टाटस बाट धेरैले स्वास्थ्यलाभ को कामना गरेका छन् भने धेरैले दुखब्यक्त गर्दै चाडै निकोभयर सदा जस्तै सबैलाई रमाइलो दिन छिटै आउनुहुने छ भन्दै कामना समेत गरेका छन्।
“छत्र साही भनेको अहिले पछिल्लो समयमा दोहोरी क्षत्रको निकै चलेको नाम हो र उनका हरेक भिडियोहरु धेरै दर्शक हरुले मनपराउने गर्दछन। अझै उनको र काजल जोसीको बिषयलाई लियर पछिल्लो समयमा अर्को चर्चा झनै चल्दै गयको पाउन सक्छौ।
“अझै भन्ने हो भने छत्र साही र काजलको माया प्रेमको कुरा बजारमा चर्चा चलिरहदा अहिले काजलले छत्र प्रती देखायको माया अनि हेर चाहले गर्दा पनि धेरै दर्शक श्रोताहरु निकै खुसी भयको समेत देख्न सकिन्छ भने छिटै नि,,को भयर यो जोडि सदाका लागि एक भयको समेत देख्न चाहने धेरै पाउन सक्छौ।
“छत्र साही र कजाल इन्द्रेणीका निकै प्यारा कलाकार हुन जसले गायका गितहरु अर्थत दोहोरीलाइ लाखौ दर्सकहरुको नजर पुग्ने गर्दछ। जसका दोहोरीका टुक्काले प्राय सबैलाइ मोहितनै गराउने गर्दछ।
“केही दिन अघिमात्र बिबाह बन्धनमा बाधिएकी काजल जोशी अहिले जुम्लामा गएर घरपरिवारसित यसरी रमाइ रहेकी छिन् ।